Egwu Apple dị ka Ihe Nketa Omenala Dị ka Jimmy Iovine si kwuo Esi m mac
Egwu Apple dị ka Ihe Nketa Omenala Dị ka Jimmy Iovine si kwuo
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Egwuregwu Apple, ọtụtụ
Na nso nso Jimmy Iovine enyewo ajụjụ ọnụ na magazin ahụ iche iche. Na otu nkọwa banyere ebumnuche Apple na ọrụ egwu egwu na-asọ asọ, yana nkwekọrịta ndị a ga-enweta ya.
Iovine, enweghị ọnọdụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ahụ, mana ọ na-ekenye ọrụ ọrụ Eddy cue , Dr. Dre, Trent Reznor, na Larry Jackson. Ọrụ Jimmy Iovine lekwasịrị anya na imechi mmekọrịta na ndị na-ese ihe ma soro Apple Music na-arụsi ọrụ ike kemgbe ha nwetara Beats na 2014.
Apple akwadowo ndị pụrụ iche kemgbe, na ụda na ugbu a na vidiyo. Usoro a họọrọ maka mgbasa ozi vidiyo bụ liji mepụta mmemme telivishọn abụọ.N'ajụjụ ọnụ adịghị abanye na nkọwa banyere atụmatụ Apple n'ọdịnihu, karịa ihe niile ka ị ghara ikpughe atụmatụ na mmepe yana na ha na-enwetakwa atụmanya karịa n'ihi ihe ọhụụ ha na-eweta. Agbanyeghị, ọ na-ekwu maka idobe ọrụ egwu nke ụlọ ọrụ ahụ dị ka "Isi okwu gbasara ọdịnala."
Mgbe a jụrụ ya banyere mmepụta nke ọdịnaya mbụ yana ntụnyere ya na Netflix, wee jụọ ma ọ bụrụ na ọ na-ele Apple Music anya ka ọ na-achọ ịsọ mpi na ndị nwere mmasị na Netflix na mpaghara nke ọdịnaya mbụ, ọ jụrụ. «Agaghị m ekwu ya ...O nweghi ihe jikọrọ ya na Netflix »
N'akụkụ ọzọ nke ajụjụ ọnụ ahụ, a jụrụ ya banyere nanị ọdịnaya na esemokwu Apple na mmadụ abụọ n'ime ndị asọmpi ya na ụlọ ọrụ ndekọ, Iovine na-egosi na ọ na-anwale na ule ndị a emeghị ka esemokwu na ndị ọrụ ibe mbụ na ụwa nke egwu, n'agbanyeghị obi ilu n'elu ọdịnaya naanị.
Iovine na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ adịla njikere ịkwado ọrụ ọ bụla ndị ahịa chọrọ ịzụ ahịa na iru nkwekọrịta maka mgbasa ya. Ọzọkwa, ọ na-ahụ ụlọ ọrụ ahụ akwadoro "ịsụ asụsụ abụọ" site na ịghọta ahịa egwu na teknụzụ site na asụsụ.
N'ajụjụ ọnụ ahụ metụtara nsogbu onwe onye, ​​mmalite ya na mmekọrịta ya na Dr. Dre. A pụrụ iche agwa na i nwere ike ịmụtakwu banyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Egwuregwu Apple » Egwu Apple dị ka Ihe Nketa Omenala Dị ka Jimmy Iovine si kwuo
Tim Cook na-aga n'ihu obere ụzọ nleta ya na ụnyaahụ ọ bụ Germany
The Duplicates Cleaner, n'efu maka obere oge